KOOXDA ISBUUCA - 11kii Xiddig Ee Todobaadkan Ugu Fiicnaa Horyaalka Premier League Oo La Soo Saaray - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKOOXDA ISBUUCA – 11kii Xiddig Ee Todobaadkan Ugu Fiicnaa Horyaalka Premier League Oo La Soo Saaray
KOOXDA ISBUUCA – 11kii Xiddig Ee Todobaadkan Ugu Fiicnaa Horyaalka Premier League Oo La Soo Saaray
April 13, 2021 admin Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Manchester City ayaa guuldarro lama filaan ah 2-1 gurigeeda kaga soo gaadhay Leeds, Manchester United ayaa hadda 11 dhibcood ka hooseysa hoggaamiyeyaasha horyaalka ka dib markii ay 3-1 kaga badiyeen Tottenham.
West Ham ayaa dib ugu soo laabatay kaalinta afaraad ka dib markii ay 3-2 kaga badisay kooxda kaalinta seddexaad ee Leicester, halka Chelsea ay ku jirto kaalinta shanaad ka dib markii ay 4-1 kaga badisay Crystal Palace.
Dhinaca kale, kooxda heysata horyaalnimada ee Liverpool ayaa dhalisay goolka guusha waqtiga dhimashada si ay uga adkaato Aston Villa isla markaana u soo afjartay lixdii kulan ee Premier League ee looga badiyay Anfield, Newcastle ayaa kor u qaaday rajadooda badbaadada iyaga oo guul soo laabasho ah ka gaadhay Burnley, Wolves ayaa xilli dambe heshay guul. 1-0 oo ka dhacday Fulham iyo Arsenal oo guul 3-0 ka gaartay kooxda ugu hooseysa Sheffield United.
Maalintii Isniinta, West Brom ayaa si fudud ku dhaaftay Southampton halka Brighton iyo Everton ay barbaro ku galeen xeebta koonfureed.
Khabiirka BBC Sport Garth Crooks ayaa soo saaray shaxdii todobaadkan ugu fiicneyd horyaalka Premier League.
Dhanka goolka waxaa ku soo baxay goolhayaha West Brom Johnstone iyadoo seddexda daafac danbe ay ka kooban yihiin xiddigaha Chelsea iyo Liverpool.
Alexander-Arnold oo goolka guusha u dhaliyay Reds todobaadkan iyo saaxiibkiisa daafaca bidix Andy Robertson ayaa shaxda ku soo baxay halka daafaca Chelsea Rudiger uu ahaa mid wacdarro u dhigay Blues todobaadkan.
Afarta khadka dhexe waxaa ka soo muuqday Lingard oo labo gool u dhaliyay West Ham kulankii ay garaaceen Leicester City, Dallas oo labadii gool ee guusha u saxiixay Leeds kulankii ay ka gudbeen Man City, Christian Pulsisic oo isna labo gool u dhaliyay Chelsea kulankii ay xasuuqeen Crystal Palace iyo xiddiga wadnaha khadka dhexe ee Arsenal Thomas Partey oo wacdarro dhigay kulankii ay Arsenal 3-0 kaga badisay sheffield United.
Weerarka waxaa ku soo baxay Allan Saint-Maximin oo goolka guusha u dhaliyay Newcastle kulankii ay dubteen Burnley, Alexandre Lacazette oo guusha ku hogaamiyay Arsenal iyo Cavani oo guusha ku hogaamiyay Man United kulankii ay London ku garaaceen Tottenham.